Cyprus Air mutyairi wetsiva anokanganisa 30 ndege
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Cyprus Air mutyairi wetsiva anokanganisa 30 ndege
NICOSIA - Ndege makumi matatu kubva neKupro dzakakanganiswa neMuvhuro apo vatyairi vemunyika inotakura Cyprus Airways CAIR.CY vakaramwa mabasa nekuda kwemamiriro ebasa.
Vatyairi vendege vanoda kuti chibvumirano chemubatanidzwa chibatanidze nyaya dzakaita sekuwedzerwa kwemihoro uye nguva dzekushanda chakambomiswa nekambani iyi muna Ndira 2005.
Kambani yendege, iyo inodzorwa nenyika zhinji, inoti haikwanise kubhadhara zvinodiwa nevatyairi vendege.
"Tinokurudzira (mubatanidzwa wevatyairi vendege) kuti uongorore mabasa ayo uye umise chero chiito chingakanganisa tarisiro yekurarama kwekambani," Cyprus Airways yakadaro mukutaura.
Cyprus Airways yakati vafambi zviuru zviviri nemazana mana vakakanganiswa nekumiswa kwebasa kwemaawa mana nevatyairi. Ndege dzese dzakarongwazve, ndege yakati.
Mutakuri uyu akagadziridzwa zvakare muna 2005, achidurura chikamu chimwe chete muzvishanu chevashandi vake uye nekumanikidza kuderedzwa kwemitengo mundege yese.
Mimwe mibatanidzwa mizhinji yakasaina shanduko, asi vatyairi vendege vakapokana nesarudzo nevatungamiriri yekumisa zvibvumirano zvekubatana.
"Izvi ndezvekudzoserwa kwezvibvumirano zvakamiswa nekambani muna 2005 zvine chekuita nenharaunda yedu yekushanda," akadaro George Charalambous, mumiriri wemubatanidzwa wevatyairi wePASIPI.
Vazhinji vatyairi vendege vakaendesa kambani iyi kumatare edzimhosva nekuunza chirongwa chekudzikisa mihoro, uye mutongo uri kutarisirwa kutanga kwegore rinouya, Charalambous akadaro.
American Airlines inonzi yakanakisa ndege yendege yekirasi yekutanga yegore rechitatu rakateedzana
Pirate kurwisa kwechikepe chakakundikana
Mishonga Itsva yeZvirwere Zvokuzvimba
Nyowani Inodzorwa Kuburitswa Ophthalmic Eye Drop Product
St. Thomas Carnival yakadzoka iye pachake nokuda kwenhoroondo ...
Colon cancer maseru akaurayiwa nehowa uye cannabis
5 nhandare dzendege dzeUS dziri muPasirose yepamusoro gumi
Zvirongwa zvinogara zvichibhururuka zvinowedzera mutengo webhizinesi...